I-anticyclone inyusa amazinga okushisa ngaphambi kwentwasahlobo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-anticyclone inyusa amazinga okushisa ngaphambi kwentwasahlobo
Intwasahlobo iyeza futhi iza nokukhuphuka kwamazinga okushisa. Lokhu kwanda kubangelwe kaningi yisimo sezulu "esidudula" futhi sidale ukwanda kwamazinga okushisa, njengoba kunjalo kuleli cala.
I-anticyclone enamandla esenhlonhlweni yethu izokwandisa amazinga okushisa ngalezi zinsuku phakathi kwama-4 no-10 degrees ngaphezulu kushiya isimo sentwasahlobo ngokuphelele, nangaphambi kokuba ifike, okwenza ukuba kufinyelelwe kuma-degree angama-27 empumalanga naseningizimu yenhlonhlo. Isebenza kanjani le anticyclone?
1 I-anticyclone enamandla
2 Ukuphakama Naphansi
Izinsuku ezilandelayo kuze kube yimpelasonto kulindeleke ukuthi isikhathi sasemini sikhuphuke phakathi kwama-4 no-7 degrees enkabeni yenhlonhlo nasempumalanga naseningizimu, ngenkathi eCanary Islands ama-thermometer angamaka kufika kuma-degree angama-30.
Isenzo sale anticyclone sinamandla kakhulu futhi okwamanje imigoqo yomoya obandayo esemkhathini ayiyisusi. Kungakho la mazinga okushisa aphezulu ngalesi sikhathi sonyaka engajwayelekile. Kuyiqiniso ukuthi ngokushintsha kwesimo sezulu kuya kushushu futhi kuyashisa kanti intwasahlobo iqala ekuqaleni, kepha hhayi ngamazinga okushisa aphezulu kangaka.
Okungaphezulu noma okuncane kuzodingeka silinde cishe izinsuku eziyishumi ukufika okubonakalayo kwengaphambili elibandayo ukuze kususwe lesi siqhwithi futhi kusisize ukwehlisa amazinga okushisa kancane siye kokunye okujwayelekile.
Ngokwemininingwane evela kwiMeteorological Agency, eMadrid kuzoba namazinga okushisa afinyelela kuma-24 degrees emini futhi azohlala enjalo kuze kube yiSonto. ESeville kuzomaka ama-27 degrees alandelwe yiCórdoba, IHuelva neMurcia ngeziqu ezingama-25 naphakathi kuka-24 no-20 degrees cishe kuzo zonke izifundazwe zaseSpain; E-Canary Islands, iSanta Cruz de Tenerife izofinyelela kuma-degree angama-30 kanti iLas Palmas izohlala kuma-26 degrees.
Kodwa-ke, ebusuku kuzoba okwehlukile. Kulindeleke amazinga okushisa aphansi futhi kuzoba seCastilla y León okukhombisa ubuncane obusezingeni eliphansi neBurgos neLeón lapho kulindeleke khona 0 no-1 degree ngaphansi kuka-zero ngokulandelana.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » I-anticyclone inyusa amazinga okushisa ngaphambi kwentwasahlobo
I-acidification yoLwandle i-Arctic isongela izakhamuzi zayo
Ukuguquka kwesimo sezulu kwenza abalimi badinge ubuchwepheshe obengeziwe